सरकारलाई जसपा नेताको प्रश्न संविधान संशोधन अघि इण्डीयासँग छलफल किन भएन ? – Namaste Dainik
June 4, 2020 NamastedainikLeaveaComment on सरकारलाई जसपा नेताको प्रश्न संविधान संशोधन अघि इण्डीयासँग छलफल किन भएन ?
तात्कालिन राजपाका महासचिव एवं नवगठित सजपाका नेता केशव झाले संविधानमा नक्सा राख्दैमा भुमि फिर्ता आउन नसक्ने बताएका छन् । सिमाना वैज्ञानिक र प्राविधिक रुपले अझै एकिन भइनसेको भन्दै झाले संविधान संशोधन अघि इण्डीया सँग सरकारले वार्ता नगरेकोमा आपत्ती जनाएका छन् ।
ओटीभी नेपाल सँगको विशेष कुराकानीमा झाले अहिलेको सरकारले जनतालाई उचालेर नाटक मात्रै गरिहेको र यो सरकारले कुनै पनि हालतमा भुमी फिर्ता ल्याउँन नसक्ने जिकिर गरे । आफ्नो पार्टी नक्साका लागी हुन लागेको संशोधनको विपक्षमा नजाने तर अहिले सम्म हामिलाई झुक्काएर राखिएकाले हाम्रो माग पनि पुरा गर्न पर्छ भनेर प्याकेज संशोधनको कुरा गरेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको झाले स्पष्ट पारे ।
अहिले सम्म मधेशीलेनै सिमाको रक्षा गरेर बसेको र अब पनी इण्डीयाले मिचेको भुमि फिर्ता ल्याउँन मधशकै सरकारले मात्रै सक्ने उनले दावी गरे । अहिले मिचिएको भनेर कुरा भएको छ आज सम्म को को सत्ता मा भएर त्यो भुमि कसले भारतलाई रजाइ गर्न दियो त्यसको पनि हिसाव आफुहरुलाई चाहिने उनले बताए ।
समसामयिक बिषयमा जसपा नेता केशव झा सँग ओटीभी नेपालले गरेको भिडियो कुराकानी यस्तो छ ।